1.5m Melt Blown Ingubo Machine, Kk Spunbond Nonwoven Machine - Meiben
Umgca wemveliso enganyibilikiyo yeMeltblown
Hebei Meiben Technology Co., Ltd.ibekwe kwiXiong'an yeSithili esitsha kwilizwe eliphakathi kweBeijing-Tianjin-Hebei ngemeko-bume entle kunye nokuhamba okufanelekileyo. Inkampani yethu ineengcali zemveliso, ezikumgangatho ophezulu, kunye nomgangatho ojolise kumgangatho, uphuculo oluqhubekayo, kunye nemveliso yoyilo loyilo loovulindlela. , Kwaye intengiso eyomeleleyo kunye neqela lenkonzo yasemva kokuthengisa elandela umthengi kuqala.
Iminyaka eli-10 yamava
Iimveliso ezingaphezu kwe-18
Ukuthumela kumazwe angaphezulu kwe-100
Umgca wemveliso nonwoven
Umgca wemveliso Spunbond nonwoven
Elona Xabiso liSMS Surgica ...
Ixabiso eliphezulu leSMS yokuSebenza ngeSinxibo seSMS Umatshini wokwenza ilaphu oPhezulu Umgangatho oPhezulu wePl Spunbond nonwoven Ilaphu Imveliso yeLin Iimpawu zamalaphu ezonyango kunye nezempilo 1. Elula: Ipolypropylene resin isetyenziswa njengeyona nto iphambili kwimveliso, kunye nomxhuzulane othile we-0.9 kuphela, zintathu kuphela kwisihlanu somqhaphu. Iyaphaphatheka kwaye iziva ilungile; 2. Ukuthamba: Yenziwe yimicu emincinci (i-2-3D) kwaye yenziwa kukudibanisa okunyibilikayo. Imveliso egqityiweyo ithambile ...
I-SMS ye-PP inyibilikisiwe ...
Inkqubo yokuveliswa kwamalaphu angalukwanga 1. Ikhadi ifayibha 2. Ifayibha kwiwebhu 3. Ukulungiswa kwenethiwekhi yefayibha 4. Yenza unyango lobushushu 5. Okokugqibela, ukugqiba kunye nokulungisa Kwishishini leemfuno zemihla ngemihla, linokusetyenziswa njengelayini yempahla izixhobo, amakhethini, izinto zokuhombisa eludongeni, amanabukeni, iibhegi zokuhamba, njl. Kwimveliso yezonyango kunye nempilo, inokusetyenziselwa ukuvelisa iigawuni zoqhaqho, iilokhwe zezigulana, iimaski, iibhanti zococeko, njl. imodeli yomgca ...
Iimpawu zamalaphu ezonyango kunye nezempilo 1. Ubunzima: I-Polypropylene resin isetyenziswa njengeyona nto iphambili kwimveliso, enomxhuzulane othile we-0.9 kuphela, eziziziqingatha ezithathu zekotoni kuphela. Iyaphaphatheka kwaye iziva ilungile; 2. Ukuthamba: Yenziwe yimicu emincinci (i-2-3D) kwaye yenziwa kukudibanisa okunyibilikayo. Imveliso egqityiweyo ithambile kwaye ikhululekile; 3. Amanzi agxothayo nophefumlayo: Izilayi zePolypropylene azifunxi amanzi, zinomxholo wokufuma ...
I-Spunmelt edityanisiweyo engekho ...
I-Meltblown umgca wemveliso engalukwanga Izinto eziluncedo kwizixhobo ezingalukanga 1. Inkqubo yonke yokuhamba kwezixhobo ezingalukanga zinokuzenzekelayo, kwaye ngabantu aba-1 ~ 2 kuphela ekufuneka basebenze, abanokugcina abasebenzi abancinci. 2. Izixhobo zelaphu ezingalukanga zinokuhlengahlengisa isantya semveliso kunye nobungakanani bemveliso ngaphakathi kuluhlu. Isixhobo esenziwe ngelaphu esingalukwanga sisebenzisa ukusebenza kwescreen sokuchukumisa, sixhotyiswe ngokunyathela ubude obungatshintshiyo, ukulandela umkhondo wefotoelectric, ukubala okuzenzekelayo nokubetha ngokuzenzekelayo, njl.
Inkqubo yemveliso yelaphu engalukwanga Iinkcukacha zemigca engalukwanga SS (Prodnct width) 1600mm 2400mm 3200mm Equipment 29x13x10m 30x14x10m 32x15x10m Speed ​​350m / min 350m / min 30m / min Gram Weighht 10-150g / m2 10-150g / m2 10-150g / Isivuno seM2 (Iimveliso ngokwe-20g / M2) 9-10T / Iintsuku 13-14T / Iintsuku 18-19T / Iintsuku ITEM EFFECTIVE WIDTH GSM YONYAKA ISIPHUMO SOKUGQIBELA UMZEKELO S 1600MM 8-200 1500T Idayimani, okweqanda, umnqamlezo kunye nomgca S 2400MM 8- 200 2400T Diamond, okweqanda, umnqamlezo kunye umgca S 3200MM ...
Amacandelo amabini aphambili emveliso yokuluka engalukwanga ye spunbond
Kule mihla, ukusetyenziswa kweempahla zokulinganisa ezingalukwanga kuxhaphakile. Ukongeza kwiimpahla esihlala sizinxiba, amalaphu angalukwanga asontiweyo nawo ayimfuneko kwiimaski ezidumileyo. Imakethi enkulu ye-spunbond yengubo engalukwanga ikwanika i-spunbond yangoku engalukwanga ilaphu ...
Izinto eziluncedo zezixhobo ezingalukanga?
Iimveliso ezininzi zisebenzisa amalaphu angalukwanga, afana namanabukeni asetyenziswa ngabantwana, kunye neemveliso ezilukiweyo ezifana neemaski. Zininzi izibonelelo zamalaphu angalukwanga. Inokungena komoya okuhle kunye nomsebenzi olungileyo wokufakwa emanzini. Ke ngoko, amalaphu angalukwanga asetyenziswa kuluhlu olubanzi lwamabala. Nangona kunjalo, kuba ...
Igumbi 401, iKomiti yoLawulo yeSuning County yoPhuhliso lwezoQoqosho kwiZithili, kwisiXeko saseCangzhou, kwiPhondo laseHebei
Iimpawu ezishushu, Imveliso eshushu, Imephu yendawo amagama okuvavanya, Amagama aphambili A, Amagama aphambili B,
Uluhlu lwamagama egama William